Save the Children oo madaxda Soomaaliya ugu baaqday baabi'inta gudniinka fircooniga - Halbeeg News
Save the Children oo madaxda Soomaaliya ugu baaqday baabi’inta gudniinka fircooniga
MUQDISHO (HALBEEG)- Hay’adda Save the Children ayaa madaxda dowladda Soomaaliya, ururada bulshada rayidka ah iyo hogaamiyayaasha kala duwan ee bulshada ugu baaqday in si deg deg ah loogu istaago sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda caruurta gaar ahaan sidii gabdhaha yaryar looga badbaadin lahaa gudniinka fircooniga.
Baaqan ay soo saartay hay’adda Save the Children ayaa ku soo aadaya kadib markii ay soo baxeen warbixinno sheegaya in ay dhowr gabdhood u dhinteen gudniinka fircooniga ah halka gabdha kalena ay weli la dhibaatoonayaan dhaawacyadii kasoo gaaray gudniinka fircooniga.
Khamiistii lasoo dhaafay laba gabdhood oo walaala ahaa Khadiijo oo 11 jir aheyd iyo Aasiya oo 10 jir aheyd ayaa u dhintay gudniinka fircooniga ah laba maalin uun kadib markii lagu sameeyay gudniinka meel baadiye ah oo ku taalla xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya gaar ahaan deegaanka Dorodo ee ka tirsan maamulka Puntland, gabdhahan ayaa dhintay kadib markii loola soo orday isbitaalka.
In ka badan 7 gabdhood oo ay da’doodu u dhexeyso 5 illaa 8 sano ayaa ay soo badbaadiyeen shaqaalaha hay’adda Save the Children kuwaa oo iminka lagu dabiibayo isbitaallo ku yaalla magaalooyinka Galdogob iyo Beledweyne.
“Aad baa aan uga uga welwelsannahay arrinkan, intaan in ka badan ayaan lasoo warinin” ayuu yiri agaasimaha Save the Children qeybta Soomaaliya Timothy Bishop.
Hay’adda Save the Children ayaa adkeysay sida ay diyaar oogu yihiin in Dowladda iyo bulshada rayidkuba ay kala shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa gudniinka fircooniga.
Dad 200 gaaraya oo loo xiray rabshado ka dhacay dalka Itoobiya
Madaxweynaha Jabuuti oo kulan la qaatay boqorka Sacuudiga